Waa maxay heshiiska ay UK ka doonayso Midowga Yurub? - BBC Somali
Waa maxay heshiiska ay UK ka doonayso Midowga Yurub?
Lama dhihi karo in Britain ay bilaabayso inay ka baxayso Midowga Yurub iyada oo aan ogayn meesha ay u socoto.
Hadalkeeda ka dib waxaa cad heshiiska ay Theresa May doonayso si ay ganacsi ula samayso suuqa Midowga Yurub, laakiin aysan u rabin inay xubin ka noqoto suuqa iyadoo xor u ah inay heshiis ganacsi la saxiixdo waddamada kale.
Inkastoo ra'iisalwasaaraha ay iskudayday inaysan wax u dhimin xiriirka UK iyo Midowga Yurub iyadoo sheegtay in loo baahan yahay iskaashi, laakiin waxay u sheegtay inaysan UK saxiixayn heshiis aysan raali ka ahayn.
Dowladda ayaa dooran karta hab kale. Tusaale ahaan Norway waxay xubin ka tahay suuqa Midowga Yurub. Laakiin waa inay lacag siisaa misaaniyada Midowga Yurub, waa inay ogolaataa dadka ka imaanaya Midowga Yurub inay si xor ah ugu noolaadaan iyo ayna ka shaqaystaan Norway, inay hirgaliyaan sharciyada maxkamadda Yurub, si rasmi ahna ugama qayb qaadan karaan markii go'aan la gaarayo. UK ma doonayso habkan.
Marka maxay UK doonaysaa?
Sida uu noqonayo xiriirka ay UK la leedahay Midowga Yurub ayaa la ogaan karaa oo kaliya markii ay ku heshiiyaan 27-da waddan ee Midowga Yurub, iyo baarlamaanka Yurub.
Ra'iisalwasaarha Jarmalka Angela Merkel ayaa u sheegtay in sharuudaha suuqa Midowga Yurub aan la yarayn karin, haddi kale waddan walba wuxuu doonayaa inuu samaysto heshiis cusub.
Waxyaabo badan oo aan la ogayn ayaa jira. Waa maxay lacagta ay Midowga Yurub doonayso in la siiyo miisaaniyadeeda si looga ganacsado suuqa Midowga Yurub? Midowga Yurub ma ogolaan doontaa in si aan buuxin looga mid ahaado suuqa? Shaqaalaha Midowga Yurub ma yeelan doonaan inay xaq u lahaadaan inay ka shaqeeyaan UK ?